Filohan’ny fikambanana “ Za Gasy “: Nandratra olona ny “gros bras”-n’ny depiote 73 -
AccueilSongandinaFilohan’ny fikambanana “ Za Gasy “: Nandratra olona ny “gros bras”-n’ny depiote 73
Filohan’ny fikambanana “ Za Gasy “: Nandratra olona ny “gros bras”-n’ny depiote 73
Omaly maraina nandritra ny fanotronan’ny filohan’ ny fikambanana za Gasy ny fanaterana ny antontan-taratasy fiarovana noho ny fitoriana izay napetrak’ireo solombavambahoaka teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana no avy hatrany dia nisy ny andian-jatovo namono sy nikasi-tanana ary nandratra i Jean Navandahy Ratiharison. Tsy fantatra mazava ny anton’izao herisetra izao fa fantatra kosa fa tazana teny an-toerana ireo gros bras avy amin’ ireo solombavambahoaka 73, izay manamarina izany ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka mpanakanto iray tamin’ny tambazotra sosialy ny tariny. Raha ny fantatra dia miisa telo ireo lehilahy izay avy hatrany dia namely totohondry ity filohan’ny fikambanana Za gasy ity. Marihina fa araka ny vaovao nangonina teny an-toerana dia tsy nanampo na inona na inona ity filohana fikambanana mpanao asa soa ity, no indro tsy misy resaka fa avy hatrany dia daroka. Efa samy nahatazana ireo “gros bras” ireo ihany ny rehetra teny an-toerana, saingy tsy nampoizina ny fihetsika tampoka izay nataon’ izy ireo, nisy ihany anefa ny famailoana, saingy izao tokoa hoe ny tampoka tsy maha lehilahy.
Fandehanana voalohan’ny solombavambahoaka sy senatera ary ireo mpanara-dia sy mpomba ny filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina teny amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny omaly hariva, saingy indrisy fa niandrasan’ireo “gros bras” ny mpanohitra 73 fotsiny izany. Io dia tsy vitan’ ny fampitahorana fotsiny fa tonga hatramin’ny famonohana ny mpanara-dia ny filoham-pirenena. Marihina anefa fa imbetsaka ary maro ny fotoana nankanesan’ny avy amin’ ny mpanohitra teny ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana , saingy nanaja izany hatrany ny avy amin’ny fitondrana na dia manana fahefana aza. Saingy indrisy vao indray mandeha monja ny mpanohana ny fitondrana no mihazo ny eny Ambohidahy, dia herisetra no nasetrin’ ireo izay tsy mpandala izany demokrasia izany. Ny hany tsy fantatr’ireo mpanakorontana sy voakarama ireo anefa, dia nisy nahazo sary izy ireo, ary efa mandeha ny fikarohana amin’ izao fotoana izao.
« Azo atokisana ahafahana manatanteraka fifidianana ny taona 2018, ny lisi-pifidianana nomena ho tsirihinay », io no nambaran’ ny jeneraly Siaka Sangaré, lehiben’ny iraka mpitsirika ny lisi-pifidianana anivon’ ny OIF, na ny vondrona iraisam-pirenen’ny frankofonia. ...Tohiny